China Horizontal Desulfurization mveliso kunye nabathengisi | Umatshini kaDelin
Imodeli: DSC (R) Uthotho lwempompo ye-FGD
Isantya (r / min): 550-740
Intloko (m): 26-27
Eyona ndlela isebenzayo: 85% -90%
Ubungakanani besuntswana obuvumelekileyo (mm): -
Impompo ubunzima (kg): 4000-8300
Ukukhutshwa kwe-dia. (Mm): 500-800
Ukutsala dia. (Mm): 600-900
Uhlobo lokutywina: Itywina loomatshini
Ukunyanzelwa IiVanes: 4, 5 Izinto eziphathekayo zeliner: chrome High alloy / Rubber
Uhlobo: - Izinto zeCasing: I-iron cast
Material: chrome ingxubevange High Ithiyori: Impompo yeCentrifugal
Ububanzi (mm): 700-1285 Ulwakhiwo: Impompo yenqanaba elinye
U-Hebei Delin Oomatshini yenye yeenkampani ezinkulu zempompo ezikhethekileyo kwimipompo ye-slurry e-China, enomhlaba ongaphezulu kwe-40,000m2kunye nendawo yokwakha ngaphezulu kwe-22,000m2. Iimveliso zisetyenziselwa ikakhulu ukuphambukisa ikhosi yomlambo, imigodi, isinyithi, ucwangciso lwesixeko, amandla, amalahle, i-FGD, ipetroleum, ishishini leekhemikhali, imveliso yemveliso yokwakha, njl.njl. ukutsala, inqanaba elinye kunye nolwakhiwo oluthe tyaba, kubandakanya izibonelelo zokuhamba ngokubanzi, ukusebenza okuphezulu kunye nokonga umbane. Uthotho lwempompo lwe-FGD luyilo oluhambelana kunye nokonga indawo. Njengomvelisi wempompo edibeneyo kunye nomthengisi eTshayina, siphuhlise izinto ezahlukeneyo zeempompo ze-DSC (R) zothotho lwe-FGD.
Iimpawu zeFGD Pump
1.Itekhnoloji yohlalutyo yokulinganisa yokulinganisa yeCFD yamkelwe kwiindawo ezinamanzi empompo, kuyilo oluthembekileyo kunye nokusebenza ngokukuko.2. Ukulungiswa kwendibano yokuthwala kunokutshintsha indawo yokuma kwindawo yokuhamba, ukugcina iyunithi yempompo ikwimeko yokusebenza esebenzayo ephezulu.
3. I-DSC (R) uthotho lweempompo ze-FGD zilwakhiwo lwangasemva lwe-disassembly, inesakhiwo esilula, kwaye kulula ukuyigcina. Akukho sidingo sokuqhaqha ukufunxa kunye nokukhupha imibhobho.
4. Iibheringi zeeroli ezinemigca emibini zifakwe kwisiphelo sempompo, iiroller ezithwala isiphelo sedrive. Iibheringi zithanjisiwe ngeoyile, ukuphucula imeko yazo yokusebenza kunye nokwandisa ubomi benkonzo.
5. Isitywina seMechanical siyilelwe ngokukodwa ityhubhu yomatshini esetyenziswayo kwinkqubo yempompo ye-FGD ye-DSC (R) yeempompo ze-FGD zothotho ezinokuthenjwa.
Izixhobo ze-DSC (R) yoDidi lweMpompo ye-FGD
Siphuhlise uhlobo olutsha lwezixhobo-isigaba esiphindiweyo sesinyithi esimhlophe-esilungele ngokukodwa izixhobo ze-FGD. Ngepropathi echasene nokurhabaxa yensimbi engenasici enganyangekiyo kunye nokumelana kwentsimbi emhlophe ye-chrome emhlophe, loo nto iyakulungela inkqubo ye-FGD.
1. Impompo yokufaka ipompo, isiciko sempompo kunye neplate yeadaptha zithwele uxinzelelo olwenziwe ngentsimbi eyakhiwe yaza yahonjiswa ngerabha.
2. Impeller, ikhava yokutsala / yokufaka ngaphambili, yenziwe ngesinyithi esiphindwe kabini ngentsimbi emhlophe.
3. I-liner yangaphambili, i-back liner, i-back liner insert yenziwa ngerabha yendalo enepropathi elungileyo yokulwa nokubola, ubunzima bokukhanya kunye neendleko eziphantsi.
Chwetheza Amandla (Q) INtloko (H) Isantya (n) Ukusebenza kakuhle I-NPSH Ukukhutshwa kweDia./suction Dia.
I-500DSC (R) 3900 1083 26 740 85 5 Ngama-500/500
I-800DSC (R) 9800 2722 27 550 90 5.2 Ngama-800/900
Chwetheza A BB B D E1 E2 F * h1 h2 J K M * L1 L2 d Ubunzima (kg)
Chwetheza N P1 P2 Q * T1 * T2 * U1 U2 INGXELO2 I-DI2 n2 d2 DPC2 INGXELO1 I-DI1 n1 d1 DPC1
Ubunzima bePompo yeFGD
Inqanaba elinye lokufunxa i-FGD Pump